Wararka - Mudaharaadyo jinsiyadeed ka dib, taallooyin ayaa laga dumiyay Mareykanka
Guud ahaan Mareykanka, taallooyinka hoggaamiyaasha isbaheysiga iyo shaqsiyaad kale oo taariikhi ah oo xiriir la leh addoonsiga iyo dilka dadka u dhashay Mareykanka ayaa la duminayaa, la ceebeynayaa, la burburinayaa, la rarayaa ama la saarayaa ka dib dibadbaxyo la xiriira dhimashadii George Floyd, oo ahaa nin madow, booliska. haynta 25 May ee Minneapolis.
Magaalada New York, Matxafka Mareykanka ee Taariikhda Dabiiciga ayaa Axaddii ku dhawaaqay inay ka saari doonaan taallada Theodore Roosevelt, madaxweynihii 26-aad ee Mareykanka, bannaanka hore ee laga soo galo. Taalada ayaa muujineysa Roosevelt oo faras saaran, oo ay dhinac fadhiyaan Afrikaan Mareykan ah iyo Dhalad Mareykan ah oo lugeynaya. Matxafka weli ma uusan sheegin waxa uu ku sameyn doono taalada.
Houston, laba taallo oo konfederaal ah oo ku yaal jardiinooyinka dadweynaha ayaa laga saaray. Mid ka mid ah taalooyinkaas, Ruuxa Isbaheysiga, oo ah taallo naxaas ah oo mataleysa malag seef iyo baal timireed leh, ayaa taagnaa Sam Houston Park in ka badan 100 sano oo hadda wuxuu ku jiraa bakhaar magaalada ku yaal.
Magaalada waxay diyaarisay in loo raro taajkii Houston Museum of African American Culture.
Halka qaar ay ku baaqayaan oo ay talaabo ka qaadayaan sidii looga takhalusi lahaa taalladaha loo yaqaan Confederate-ka, kuwa kalena way difaacaan.
Magaalada Richmond, Virginia, taallada General Confederate-ka Robert E.Lee waxay noqotay xarun khilaaf. Dibadbaxayaasha ayaa dalbanayay in taallada la dejiyo, Badhasaabka Virginia Ralph Northam ayaa soo saaray amar ah in meesha laga saaro.
Si kastaba ha noqotee, amarka ayaa la xannibay iyadoo koox milkiileyaal milkiileyaal ah ay dacwad u gudbiyeen maxkamad federaal ah iyagoo ku doodaya in ka saarista taalada ay qiimo beelayso guryaha ku hareeraysan.
Garsooraha Federalka Bradley Cavedo wuxuu usbuucii hore xukumay in taalada ay tahay hantida dadka iyadoo lagu saleynayo warqada qaab dhismeedka laga soo bilaabo 1890. Wuxuu soo saaray amar ka mamnuucaya gobolka inay hoos u dhigto ka hor inta aan la gaarin xukunka ugu dambeeya.
Daraasad 2016 ay sameysay Xarunta Koonfurta ee Saboolnimada (Poverty Law Center), oo ah hay'ad u doodda sharciga oo aan faa'iido doon ahayn, ayaa lagu ogaaday in ay jiraan in ka badan 1,500 astaamaha Confederate-ka ee guud ahaan Mareykanka qaabab taallo, calammo, taargooyinka gobolka, magacyada dugsiyada, waddooyinka, jardiinooyinka, ciidaha iyo saldhigyo millatari, oo inta badan ku urursan Koonfurta.
Tirada taalladaha taalladaha ah iyo taallooyinka markaa waxay ka badnaayeen 700.
Aragtiyo kala duwan
Ururka Qaranka ee Hormarinta Dadka Midabaysan, oo ah urur xuquuqda madaniga ah, ayaa ku baaqay in laga qaado astaamaha isbahaysiga meelaha dadweynaha iyo dawladda sanado badan. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira aragtiyo kala duwan oo ku saabsan sida loola macaamilayo waxyaalaha taariikhiga ah.
Tony Brown, oo ah borofisar madow ee cilmiga bulshada iyo agaasimaha kooxda cunsuriyadda iyo khibradaha jinsiyadeed ee jaamacadda Rice ayaa yiri: "Waan ka murugooday arrintan maxaa yeelay tani waa matalaadda taariikhdeenna, tani waa matalaadda wixii aan u maleynay inay caadi yihiin." Isla mar ahaantaana, waxaan ku yeelan karnaa nabar bulshada dhexdeeda ah, umana maleyneyno inay caadi tahay wixii hadda ka dambeeya oo waxaan jeclaan lahayn inaan sawirrada ka qaadno.
Ugu dambeyntiina, Brown wuxuu yiri waxaan jeclaan lahaa inaan arko taalooyinka oo sii jiraya.
Waxaan u egnahay inaan dooneyno inaan caddeyno taariikhdeena. Waxaan u egnahay inaan rabno inaan dhahno cunsuriyaddu qeyb kama ahan cidda aan nahay, qeybna kama ahan qaab-dhismeedkeena, qeybna kama ahan qiimaheena. Marka, marka aad taallo ka qaaddo, waxaad caddeyneysaa taariikhdeena, laga bilaabo xilligaas wixii ka dambeeya, waxay u egtahay in kuwa dhaqaajiya taallada ay dareemaan inay qabteen wax ku filan, ”ayuu yiri.
Waxyaabaha aan laga dhigin inay ka baxaan laakiin waxyaabo la arki karo iyadoo la adeegsanayo macnaha guud waa sida saxda ah ee aad dadka uga dhigeyso inay fahmaan sida midab takoorka qotada dheer uu u yahay, Brown ayaa ku doodaya.
“Lacagta ummaddeenna waxaa laga sameeyaa cudbi, lacagteenna oo dhanna waxaa lagu daabacaa rag caddaan ah, qaarkoodna addoommo ayey leeyihiin. Markii aad muujiso caddaynta noocaas ah, waxaad dhahdaa, waxyar sug, waxaan wax ku bixinnaa suuf lagu daabacay milkiilayaasha addoommada. Markaa waxaad arkaysaa sida qoto dheer ee cunsuriyaddu u jirto, ”ayuu yidhi.
James Douglas, oo ah borofisar cilmiga sharciga ka dhiga Jaamacada Texas Southern University isla markaana ah madaxweynaha qaybta Houston ee NAACP, wuxuu jeclaan lahaa in la arko taalooyinka Confederate-ka.
“Wax xiriir ah kuma lahan Dagaallada Sokeeye. Taaladahan ayaa loo dhisay si loo sharfo askarta isbahaysiga iyo in dadka Afrikaanka ah ee Maraykanka ah la ogeysiiyo in dadka caddaanka ahi ay gacanta ku hayaan. Waxaa loo dhisay si loo muujiyo awooda dadka cadaanka ah ay ku leeyihiin Afrikaanka Mareykanka, ”ayuu yiri.
Go'aankii ayaa lagu dhajiyay
Douglas sidoo kale wuxuu dhaleeceyn u yahay go'aanka Houston ee ah inuu u wareejiyo Ruuxa taallada Confederacy madxafka.
Taaladaan ayaa ah in lagu sharfo halyeeyadii u soo halgamay xuquuqda dowlada, asal ahaan kuwii u soo halgamay in Afrikaanka Mareykanka ah addoomo ahaan looga dhigo. Miyaad u maleyneysaa in qofna soo jeedin doono in taallo la dhigo Matxafka Holocaust oo leh taaladaan waxaa loo dhisay in lagu sharfo dadkii Yuhuudda ku dilay qolka gaaska? ” Ayuu waydiiyay.
Taaladayaasha iyo xusuusta waxaa loogu talagalay in lagu sharfo dadka, ayuu yiri Douglas. Kaliya inaad geliso matxafka Afrikaanka Mareykanka kama qaadayo xaqiiqda ah in taalooyinka iyaga lagu maamuuso.
Brown, tagitaanka taallada meeshiisa ma maamuusayso qofkaas.
Aniga ahaan, waxay muujineysaa hay'adda. Markaad leedahay taallo loo yaqaan 'Confederate', wax kama sheegayo qofka. Waxay wax ka sheegaysaa hogaanka. Waxay wax ka sheegaysaa qof kasta oo wax ku saxiixay taaladaas, qof kasta oo yidhi taaladaas ayaa iska leh. Uma maleynayo inaad rabto inaad tirtirto taariikhdaas, ”ayuu yiri.
Brown wuxuu yiri dadku waa inay waqti badan ku qaataan xisaabtanka sida ay tahay "waxaan go'aansanay in kuwani ay yihiin geesiyaasheenii aan ku bilaabi lahayn, annaga oo tixgalinaya sida aan u go'aansanay in sawiradaasi ay caadi ahaayeen".
Dhaqdhaqaaqa Mawduuca Madoow wuxuu ku qasbayaa Ameerika inay dib-u-eegis ku sameyso wixii ka dambeeyay taallooyinka Confederate-ka.
HBO waxay si ku meel gaar ah uga saartay filimkii 1939 Gone with the Wind waxyaabihii ay ka bixisay qadka tooska usbuucii la soo dhaafay waxayna qorsheyneysaa inay dib u sii daayaan filimka caadiga ah iyadoo laga doodayo xaaladiisa taariikhiga ah. Filimka ayaa lagu dhaliilay inuu weyneeyo addoonsiga.
Sidoo kale, usbuucii la soo dhaafay, Quaker Oats Co ayaa ku dhawaaqday inay ka saarayso sawirka haweeney madow mid ka mid ah baakadaha ay ku jirto 130-sano jir sharoobada iyo sumcadda isku darka Aunt Jemima isla markaana bedeshay magaceeda. Mars Inc ayaa raacday isla markaana ka saartay sawirka nin madow baakada ay caanka ku tahay ee ah Uncle Ben's oo ay sheegtay inay u bixin doonto magaca.
Labada magac ayaa lagu dhaleeceeyay sawiradooda khaldan iyo adeegsiga maamuus ee ka tarjumaya xilligii dadka reer koonfureed ee caddaanka ahaa ay adeegsan jireen "habar" ama "adeer" maxaa yeelay ma aysan rabin inay dadka madow ugu yeeraan "Mr" ama "Mrs".
Labada Brown iyo Douglas labaduba waxay u arkaan tallaabada HBO mid caqli gal ah, laakiin waxay u arkaan dhaq-dhaqaaqyada labada shirkadood ee cuntada kaladuwan.
"Waa wax sax ah in la sameeyo," ayuu yiri Douglas. “Waxaan ka helnay shirkadaha waaweyn inay ogaadaan beenta wadooyinkooda. Waxay leeyihiin (waxay leeyihiin), 'Waxaan dooneynaa inaan bedelno maxaa yeelay waxaan ogaanay inay tani tahay sawir xun oo Afrikaan Mareykan ah.' Way garteen hadda waana ka takhalusi doonaan. ”
Wixii Brown, dhaqdhaqaaqyadu waa hab kale oo shirkadaha loogu iibiyo alaabooyin badan.
Dibadbaxayaasha ayaa isku dayaya inay dumiyaan taallada Andrew Jackson, madaxweynihii hore ee Mareykanka, oo ku taal Lafayette Park oo ku hor taal Aqalka Cad inta lagu gudajiray dibadbaxyada sinaan la’aanta jinsiyadaha ee Washington, DC, Isniintii. JOSHUA ROBERTS / REUTERS